Sarkaal Russian oo ka qayb galay kulankii dhexmaray wiilka Trump iyo qareenada Russia - Horn Future
Sarkaal Russian oo ka qayb galay kulankii dhexmaray wiilka Trump iyo qareenada Russia
Washington (Horn Future)-Televishanka “NBC” ee Maraykanka ayaa sheegay in kulankii dhexmaray wiil uu dhalay Trump iyo qareenada Russia u dhalatay bishii June 2016 sidoo kale uu ka qayb galay xubin kamid ah ururka u ololeeya Russia iyo America oo ahaa sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonkii Midowgii Sovietii.
Warkan uu sheegay televishankan ayaa waxa uu kusoo beegmaya xilli ay soo baxayaan in lagu sameeyo baadhitaan madax-bannaan ilaha saameeynta ee ka iman karta Russia ee ku saabsan doorashadii Maraykanka .
Waxa shabakadda “NBC” oo aanan xusin magaca qofka ka qayb galay kulankan ay sheegtay inuu beeniyay inuu jiro xidhiidho imika uu la heeyahay sirdoonka Russia.
Dhinac kale wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in xubin ka mid ah ururkan uu xaqiijiyay in kulankan uu ka qayb galay isaga oo aanan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Waxa televishanka NBC uu faafiyay e-mailo taxane ah oo badhkood ay xaqiijiyeen inay tahay calaamadii ugu weynayd ee muujinaysa inay jirto khiyaamo ka dhaxaysay kooxda doorashada Trump iyo Kremlin ka oo saamayn ku yeelatay natiijadii doorashada madaxtooyada ee 2016.
Waxa xusid mudan in wargayska New York Times uu daaha ka fayday markii u horeeysay kulanka dhexmaray Donald Trump wiilka uu dhalay iyo qareenadan u dhalatay Russia.
« Madaxweye Erdogan oo wadahadal la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaradda Qadar	» Guumaysiga Isra’iil oo maalintii labaad oo xidhiidh ah si buuxda u xidhay Masjidka Al-Aqsa